Khiyaamooyidda caymiska oo welwel iyo walaac laga muujiyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Johan Nilsson /TT
Khiyaamooyidda caymiska oo welwel iyo walaac laga muujiyey
La daabacay fredag 14 februari 2014 kl 10.02
Waxaa soo kordhay shirkadaha caymiska oo diida in ay bixiyaan lacagaha caymiska maadaama la tuhunsan yahay khiyaamooyin. Meelaha ugu badan oo in caymis laga bixiyo la diido waxaa ka mid ah baabuurta gubata ama dhaawacyada kala duwan soo gaaraan. Sidaasna waxaa qoray wargeyska Dagens Nyheter.
Sannadkii 2012 waxay shirkadaha caymisku diideen bixinta lacag gaareysa 397 milyan oo karoon. Sannadkii ku xigayna waxay lacagta la diidey gaareysey 463 milyan oo karoon, taas oo ah koror u dhigta boqolkiiba 17. Sidaasna waxaa lagu muujiyey qoraal cusub oo uu soo saaray ururka shirkadaha caymiska ka dhexeeya oo lagu magacaabo Larmtjänst.
Dadka khiyaamaooyinkaas lugta ku leh ayaa ah dadka dhashay siddeetameeyadii. Dadkaas ayaa lix jibbaar ka badan dadka dhashay afartameeyadii xagga isku dayga khiyaamooyinka ama dhagaraha, in kastoo ay yar tirada dadkaas caymiska kaga jirta. Sidaas waxaa war-saxaafdeed ku soo saaray Svensk Försäkring oo ah urur ilaaliya danaha shirkadaha caymiska.
Meelaha ay dalka ka dhacaan khiyaamooyinka ugu badan ayaa kala ah gobolada Stockholm, Västra Götaland iyo Skåne.